कावासोतीको बृद्धा मृत्यु प्रकरण : छोरा भन्छ्न् , आमाको हत्या भएकै हो कारबाही होस् ( भिडियो सहित)
बुधवार, असार ३१, २०७७ ०५:४७:०१ युनिकोड
आइतवार, जेठ १८, २०७७ सत्यकलम संवाददाता
कावासोती : नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पुर्व) कावासोती नगरपालिका ८ मा भएको ८२ बर्षिया बृद्धाको हत्या या मृत्यु भनिएको घटनामा मृतक बृद्धाका छोराले आमाको हत्या नै भएको बताएका छन् । छोरा चन्द्रकान्त अधिकारीले घटनाको प्रकृति हेर्दा आफ्नो आमाको हत्या गरिएको देखिएकाले प्रहरीलाई आफूले किटानी जाहेरी दिइसकेको बताउँछन् ।
उनले बुहारी (आफ्नी श्रीमती)ले नै हत्या गरेको आरोप लगाएका छन् । र कानुन बमोजिमको कारबाहीको माग गरेका छन् । किरियामा बसेका चन्द्रकान्तले कुराकानीकाा क्रममा आफूले प्रहरीको अनुसन्धानमा पुर्णरुपमा सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
उनिसंग गरेको केहि प्रश्न उत्तरः
तपाईको बिचारमा घटना हत्या हो कि दुर्घटना ?
घटनाको प्रकृति हेर्दा हत्या देखिन्छ । त्यसैले मैले प्रहरी समक्ष हत्या नै भएको र दोषीलाई कानुन बमोजिमको कारबाही होस् भनेर किटानी जाहेरी दिएको छु । निज (मृतकको बुहारी)ले हत्या गरेको भनेर प्रहरीमा जाहेरी दिएको छु । प्रहरीलाई मेरो तर्फबाट अनुसन्धानमा पुर्णरुपमा यो बिषयमा सहयोग गर्नेछु र काज किरियापछि प्रहरीले उपस्थित हुन भनेको समयमा हुनेछु भनेको छु ।
खास घटना कसरी भयो ?
म बिहानी साढे चार बजे शौचालय जानका लागी बाहिर निस्किेको थियो । श्रीमतीले आमाले बाबु बाबु भनेर बोलाउनु भएको छ जानुस् त किन हो भनेपछि म तल झरेँ (बृद्ध एकतला बस्ने गर्नुहुन्थ्यो) तल झर्दा टाउकोमा गम्भिर चोट देखेँ । त्यसपछि हामीले अस्पताल लगिहाल्यौं ।
घटना अघिका दिनहरुमा सासु बुहारीको सम्बन्ध कस्तो थियो ?
घरमा म हुँदा त्यस्तो झगडा हुन्थेन । तर म काममा गएको बेला घरमा आमा र मम्मीको झगडा भएको थियो, हामीले सम्झायौं भन्थे । त्यस्तो ठुलो झगडा भएको जस्तो लाग्दैन ।
(गोपिकृष्ण चापागाईंको सहयोगमा)
बाँकी कुराकानी भिडियोमा हेर्नसक्नुहुनेछ
प्रकाशित मिति: आइतवार, जेठ १८, २०७७, ०६:२२:००